Xhumana nathi - Hebei Kingmetal Flange And Fitting Manufacturing Co., Ltd.
Imikhiqizo yethu ithunyelwa emhlabeni wonke. Amakhasimende ethu ahlala anelisekile ngekhwalithi yethu enokwethenjelwa, izinsizakalo eziqondiswe kumakhasimende nezintengo zokuncintisana. Umsebenzi wethu "ukuqhubeka nokuthola ukwethembeka kwakho ngokunikela ngemizamo yethu ekwenzeni ngcono njalo imikhiqizo yethu kanye nezinsizakalo ukuze kuqinisekiswe ukwaneliseka kwabasebenzisi bethu bokugcina, amakhasimende, abasebenzi, abahlinzeki kanye nemiphakathi yomhlaba wonke esisebenzisana nayo".
Ipaki lezimboni i-xizhaotong, idolobha lase-shijiazhuang, i-hebei, i-china
Abasebenzi bethu banamathela emoyeni wobuhlakani obususelwa ekuthembekeni nasekusebenzisaneni, kanye nenkolelo yokuthi "Ikhwalithi Yekilasi Lokuqala Elinenkonzo Enhle". Ngokuya ngezidingo zawo wonke amakhasimende, sinikezela ngezinsizakalo ezenziwe ngezifiso nezenzelwe wena ukusiza amakhasimende afinyelele izinhloso zawo ngempumelelo. Yamukela amaklayenti asekhaya naphesheya ukubiza futhi abuze!
Sicela uxhumane nathi ngokusithumela ama-imeyili noma usishayele uma unemibuzo mayelana nenhlangano yethu. Ungathola imininingwane yethu yekheli ekhasini lethu lewebhu bese uza enkampanini yethu ukuthola inhlolovo yenkambu yokuthengiswayo kwethu. Siyathemba ukuthi sizokwabelana ngempumelelo eyodwa futhi sakhe ubudlelwano obuqinile bokusebenzisana nabalingani bethu kule makethe. Sikhangelele imibuzo yakho.
KUTHOLAKALA NGO-9 ekuseni KUFIKE NGO-6 ntambama